FAMPIELEZAN-KEVITRA : Ilaharana ny manao fanambaràna fanohanana an’i Andry Rajoelina ao amin’ny M3TV
Ilaharana mihitsy ireo fandaharana maro ao amin’ny M3tv sy M3Fm anehoan’ireo mpanohana maro fa Andry Rajoelina hatrany no azy ireo. 6 décembre 2018
Tsy tanora tsy olon-dehibe fa dia Andry Rajoelina avokoa ny nosafidian’izy ireo. Maro araka izany ireo filohana fikambanana na olon-tsotra tonga manazava ny antony isafidianany an’i Andry Rajoelina sy ny IEM ary manentana ny olona hanaraka ny safidiny. Nisokatra ny talata teo ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana fihodinana faharoa, ka ny talata io ihany dia efa maro sahady ireo tonga nitondra ny fananany manokana hasiana sarin’i Andry Rajoelina.
Anisany mitarika ny fampielezan-kevitra eto Mahajanga i José Randrianasolo PDG-n’ ny M3TV sy Nina depiote voafidy tamin’ny lokon’ny MAPAR ary Andriantomanga Mokhtar ben’ny tanànan’i Mahajanga. Anisany tanàna be mpitia an’i Andry Rajoelina i Mahajanga. Betsaka rahateo ireo fampanantenana nataony ho an’ny tanoran’i Mahajanga dia ny hampiroboroboana ny fizahantany, ny fananganana ireo buildings hamidy mora amin’ny tanora, ny fanaovana tanàna vaovao….
Izay an’i Mahajanga manokana. Ao ihany koa ny fampanantenany ny fametrahana ny fandriampahalemana izay irin’ny maro ankehitriny. Fampiasana teknolojia dia ny drone fakana sary, ireo fitaovana maro… ary ihany koa ny fametrahana puce misy géolocalisation sy manome ‘informations’ hatao amin’ny omby.